Soo Saaraha Gooryaanka | Tiknoolojiyad tayo sare leh & horumarsan - Ever-Power
Bogga ugu weyn / Gear / Gooryaanka Gear
Qalabka Gooryaanka waxaa badanaa la isticmaalaa markii loo baahdo dhimista xawaaraha badan. Qiyaasta dhimista waxaa lagu go'aamiyaa tirada bilowga dixiriga iyo tirada ilkaha ee ku yaal qalabka dixiriga. Laakiin goomaha dixirigoodu waxay leeyihiin xiriir isdaba-joog ah oo aamusnaan ah laakiin u muuqda inuu soo saaro kuleyl oo leh waxtarka gudbinta oo yar.
Qalab badan oo dixirigoodu wuxuu leeyahay hanti xiiso leh oo aan qalab kale oo go'an uusan haysan: dixirigu wuxuu si fudud u rogi karaa qalabka, laakiin qalabku ma rogi karo dixiriga. Tani waa sababta oo ah xagalka dixiriga ayaa aad u hooseeya oo marka qalabku isku dayo inuu wareejiyo, khilaafka u dhexeeya qalabka iyo dixiriga ayaa dixiriga leh meeshii.
Astaantan ayaa faa'iido u leh mashiinnada sida nidaamyada wax lagu raro, taas oo aaladda qufulku u shaqeyn karto sida bareega loogu talagalay qaadista marka mootadu aysan leexanayn. Mid ka mid ah adeegsiga kale ee aadka u xiisaha badan ee geedka dixiriga waxaa loo isticmaalaa qaar ka mid ah gawaarida waxqabadka sare leh iyo gawaarida xamuulka.
Sida qalabka wax soo saarka, guud ahaan, dixiriga waxaa laga sameeyaa bir adag halka qalabka dixirigana laga sameeyay bir jilicsan sida aluminium naxaas ah. Tani waa sababta oo ah tirada ilkaha ee dixiriga dirxiga ay aad u sarreeyaan marka la barbardhigo dixiriga iyadoo tiradeeda bilowga ay badanaa tahay 1 illaa 4, iyada oo la yareynayo dirxiga qalabka dixiriga, isku dhaca ku dhaca ilkaha dixiriga ayaa la dhimayaa. Astaamo kale oo ah soosaarka dixiriga ayaa ah baahida mashiin khaas ah oo loogu talagalay goynta qalabka iyo ilkaha ku xoqidda dixiriga. Qalabka dixiriga ah, dhinaca kale, waxaa lagu samayn karaa mashiinka hobbing-ka ee loo isticmaalo geerida kicinta. Laakiin qaabka ilkaha oo kala duwan awgood, suurtagal maaha in dhowr jeer la wada jaro hal mar iyada oo la isku dhejinayo qalabka bannaan sida loogu samayn karo qalabka geerka.
Codsiyada geerka dixiriga ah waxaa ka mid ah sanaadiiqda marshada, kalluumeysiga cirifka kalluumeysiga, gitaarka xargaha dhejinta biinka, iyo halka lagu hagaajinayo xawaaraha jilicsan iyadoo la adeegsanayo dhimista xawaaraha badan. Intaad ku wareejin karto qalabka dirxi dixiriga, had iyo jeer suurtagal maaha inaad beddesho dixiriga adoo adeegsanaya qalabka dixiriga ah. Tan waxaa loogu yeeraa is-qufulka is-muujinta. Astaamaha is-qufulka markasta lama hubin karo oo hab gaar ah ayaa lagula talinayaa kahortagga dhabta ah ee saxda ah.
Sidoo kale waxaa jira nooc marsho dixirigoodu ka kooban yahay. Markaad isticmaaleyso kuwan, waxaa suurtagal ah in la hagaajiyo dhabar jabinta, sida marka ilkuhu xirmaan ay u baahan tahay hagaajinta dhabar jabinta, iyada oo aan u baahnayn isbeddel masaafada dhexe. Ma jiraan soo saarayaal aad u tiro badan oo soo saari kara dixiriga noocan ah.
Qalabka dirxi waxaa badanaa loo yaqaan 'wheel worm'.
Muujinaya 1-32 ee natiijooyinka 58
set dixiriga dirxi micro
wheel dixirigoodu naxaas ah
noocyo dixirigoodu yar yahay
giraanta dixiriga ah
dixiriga hal bilow ah
multi bilowga dixiriga
dixirig laba jibbaaran
laba jibbaar dirxi marooji ah
laba goor bilaw geedka dixiriga ah
qalabka dixiriga cnc
saarayaasha dixiri giraanta
qalabka dixiriga caadada
hal dirxi dixir
bir dixirigoodu yahay bir bir ah
Duplex Gooryaanka Gear
geedka dixiriga ah
daboolan qalabka dixiriga ah
qalabka dixiriga gacanta
dixirigoodu wuxuu laayay wadista
wheel dixiriga ah iyo geed dixirigoodu
dixirigoodu iyo qalabka pinion
saxan dixiriga saxan
dixiriga dixiriga ah
qalabka dixiriga ah ee globoid
nema 23 geedka dixiriga ah
nema 17 geedka dixiriga ah